အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - Qligent 2019 NAB Show မှာနှစ်ဦးဂုဏ်သတင်းဆုပေးပွဲအခမ်းအနားဆင်နွှဲ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Qligent 2019 NAB Show မှာနှစ်ဦးဂုဏ်သတင်းဆုပေးပွဲအခမ်းအနားဆင်နွှဲ
Qligent အဆိုပါ IABM Bam Awards® 2019 ဧည့်ခံမှာယင်း၏ဆုလက်ခံ။ ညာဘက် left မှ: Anatoly Shishin နှင့် Qligent ၏ Ted Korte, IABM CEO ဖြစ်သူ Peter White ။
Vision ၏ Analytics မှပလက်ဖောင်းကိုအနိုင်ပေး IABM တီဗီနည်းပညာအားဖြင့်တင်ပြ Bam Awards® 2019 အသိအမှတ်ပြုမှုပေါင်းအနာဂတ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Show ကိုဆုချီးမြှင့်ခြင်း,
မဲလ်ဘုန်း, ဖလော်ရီဒါ, ဧပြီ 17, 2019 - Qligent ယင်း၏အအောင်မြင်ဆုံးပတ်လည်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖဲကြိုးချည်ထား NAB ပြရန် ၎င်း၏အသစ်သောမျှော်မှန်းချက် Analytics မှပလက်ဖောင်းနှစ်ခုဂုဏ်သိက္ခာစက်မှုလုပ်ငန်းဆုနှင့်အတူယနေ့အထိ။ ကအသိအမှတ်ပြု IABM နှင့်အနာဂတ်, အဆုပုံကိုသရုပ်ပြ Qligent ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခု ပို. ပို. ကျိုးရုပ်မြင်သံကြားဈေး၌တိုက်ပွဲများကြည့်ရှုသူများနှင့်ဖောက်သည်အလွန်အမင်းမှဆောင်တတ်၏ advanced သောတန်ခိုးတော်န်းကျင်ညာဘက်ခလုတ်ဝင်တိုက်ခဲ့သည်။
Qligent မှာယင်း၏ဆုလက်ခံ IABM Bam Awards® 2019 ဧည့်ခံ။ ညာဘက် left မှ: Anatoly Shishin နှင့် Ted Korte Qligent, IABM CEO ဖြစ်သူ Peter White ။
Qligent'' s ကို Vision ၏ Analytics မှကြည့်ရှုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏အရည်အသွေးစောင့်ကြည့်ခြင်း, မျိုးစုံပေးပို့ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာအမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးအားကာကွယ်ပေးရန်အစွမ်းထက် cloud-based ကြီးတွေဒေတာဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ Vision ၏ Analytics မှ၎င်း၏ဖောက်သည်လျင်မြန်စွာအရည်အသွေးကိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်မှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုကူညီဒေတာသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း, စက်သင်ယူမှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏တနျခိုးထဲကနေအလားတူ။
Vision ၏ Analytics မှ၏တန်ခိုးသည်လွန်ခဲ့သောမိုင်မှထွက်မဆိုပေးထားမှာယခုအချိန်တွင်-ထူးခြားတကမ္ဘာလုံးမည်သည့်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးရုပ်သံလိုင်းကိုဖြတ်ပြီးကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအမြည်းရန်၎င်း၏စွမ်းရည်မှတဆင့်လာ andmonitor မဆိုပလက်ဖောင်း, ကွန်ယက်, ရုပ်သံလိုင်း, ဒါမှမဟုတ် app ကိုအပေါ်အတှေ့အကွုံ viewer ရဲ့အရည်အသွေးကို။ ဤအကြီးမားဒေတာအစုံ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက် Vision ၏ Analytics မှ In-depth, ကျယ်ပြန့်မြင်ကွင်းထဲကနေ granular အထိထုတ်လွှင့်, MVPDs နှင့်အခြားအကြောင်းအရာကိုပိုင်ရှင်တွေအစီရင်ခံမိမိတို့၏မီဒီယာစစ်ဆင်ရေး၏ကနျြးမာရေး၏တန်ဖိုးရှိသောအကဲဖြတ်ပေးသည်။
"သူတို့ပြဿနာများ, ရှာတွေ့ကိုရယူသုံး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပြပွဲစောင့်ကြည့်တွေ့ကြုံခံစားလျှင်အဆုံးမဲ့မီဒီယာဖျော်ဖြေရေး options များရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူကြည့်ရှုလျင်မြန်စွာစိတ်ပျက်ကြီးထွားမည်အခြားရွေးချယ်စရာအကြောင်းအရာပေါ်ရွှေ့," Ted Korte, CTO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် Qligent။ "မျှော်မှန်းချက် Analytics မှအကျိုးရှိစွာနည်းပညာပံ့ပိုးမှု, စွန့်စားမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သစ္စာရှိမှုတိုးတက်မှုကနေအထိခြောက်လသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ဌာနဆိုင်ရာမှအရေးပါ Real-time ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။ "
Qligent ၏ငွေရစေခြင်းကဏ္ဍအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် IABM Bam Awards® 2019 ။ Vision ၏ Analytics မှထိရောက်စွာစာရင်းပေးသွင်းထားသူအလွန်အမင်းနှင့်ပရိသတ်ကိုတိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ဖို့ထုတ်လွှင့်, ဝန်ဆောင်မှုပေးနဲ့ content ပိုင်ရှင်များ၏လက်၌ကျောပါဝါတတ်၏။ အားလုံးပဏာမ entries တွေကိုနောက်ဆုံးမှာအသီးအသီးအမျိုးအစားဆုရှင်ကို ရွေးချယ်. ကြောင်းအထူးကုတရားသူကြီးတစ်ဦးလွတ်လပ်သော panel ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ Qligent 40 ထဲကမရွေး 160 တွေဟာလည်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် IABM Bam Awards® 2019 တင်ပြချက်များ။
Show ကိုဆုပေးပွဲ၏အနာဂတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်နီယာများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး panel ကိုတို့ကအကဲဖြတ်နေကြသည်။ သူတို့ကတီထွင်ဆန်းသစ်မှု, အင်္ဂါရပ်ထား, စက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီသီးခြားစာအုပျ၏အထူးသဖြင့်ပစ်မှတ်စာဖတ်သူအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားသည်။ အနာဂတ်ရဲ့တီဗီနည်းပညာထုတ်ဝေ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားအခွင့်အာဏာသည်ထုတ်လွှင့်, cable နဲ့ထုတ်လုပ်မှု, post ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, စီးပွားရေးနှင့်မီဒီယာအသစ်စျေးကွက်အမှုဆောင်နေသည်။
Qligent ထုတ်လွှင့်, content တွေကိုဖြန့်ဖြူးကြော်ငြာအေဂျင်စီများ, အားပြိုင်မှုနှင့်ကွန်ရက်အော်ပရေတာများအတွက်ဗိသုကာပြည့်စုံစောင့်ကြည့်မှု, visualization နှင့်ဖြန့်ဝေ analytics ဖြေရှင်းနည်းများ။ မဲလ်ဘုန်း, ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက်, Qligent'' s ကို software ကို-defined ချဉ်းကပ်မှုဆိုအရွယ်အစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖြတ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်, မျိုးစုံအချက်ပြမှုများ၏သမာဓိရှိနှင့်လိုက်နာမှု, စီးနှင့်စနစ်များစောင့်ကြည့်ဖို့ပွင့်လင်း, ရောင်းချသူ-Agnostic ပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ ၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံပေးပို့ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏တူညီသောတသမတ်တည်းအရည်အသွေးကိုပေး။
ယခင်: Bittree အကွိမျမြားစှာဆုချီးမြှင့် Dante-Enabled ပေး Audio Patchbay များအတွက်ဆွတ်ခူးပွဲပြုလုပ်
နောက်တစ်ခု: HPA ဆုပေးပွဲဖွင့်လှစ်အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုသည် Entries သည် Call